Mụta ilere akara nke akwụkwụ gị n'usoro
Edere site Tranquillus | August 22, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Lelee payslip gị kwa ọnwa, ọ bara uru n'ezie? Nke a abụghị naanị bara uru mana ọ dị mkpa karịa. Enwere ndepụta nke oke ịkekọ ugboro ugboro na payslips. Ọ dị mwute ikwu na ihe juru ebe niile juru ebe ị na-eche. Otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị ọrụ ahụ kwuru na ha achọpụtala na-ezighi ezi na ụzọ akwụ ụgwọ ha n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga. Nke a bụ ihe na-apụta na a Ọmụmụ IFOP duziri n’afọ 2015 n’okwu a. Ya mere enwere ohere di nma na nsogbu a gha emetụta gi. I nwere afọ atọ ịchọrọ iji nweta ego gị. N'ọnọdụ ebe mmejọ na na-ede ihe ị na-akwụ ewetala na ịkwụghị ụgwọ ego iji kwụrụ gị.
Lelee payslip gị malite na njehie kachasị
Nke a bụ ụfọdụ mmejọ nke o nwere ike ị na-ahụ na payslip gị. Mmehie ya nke ọ bụla dị ka emezighị emezi. Ọnwụ ego nke nwere ike ịba uru ụfọdụ. Ọ bụrụ na etinyeghị ogo gị na afọ 10. Ekwela m ka ị were ego ole furu efu. Toghara ikwu mgbe oge ruru, gbakọọ ezumike nka ezumike nka. Kedu nke gha dabere na nkwuputa ego mara mma. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ anaghị akwanyere ya ùgwù mkpokọta nkwekọrịta na ike.
Examplesfọdụ atụ nke omume rụrụ arụ zuru ebe niile
Nọmba oge ezighi ezi na-ezighi ezi
Na-ezighi ezi gbakọ ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị ezumike
Agaghị edenye ogo gị na ngụkọta oge ụgwọ ọnwa gị
Ichefu ikwughachi akuko ugwo
Anaghị etinye nkwekọrịta mkpokọta
Ọnụnọ maka ezumike ọrịa na-akọwaghị
Ndepụta nke ihe ị ga-atụle
1) ozi Izugbe
Aha na adreesị onye were gị n'ọrụ
Koodu NAF ma obu APE
Nhazi nke ahu nke n’ego n’ile oru nchekwado onwe onye n’aka ndi oru gi na onu ogugu nke egoro n’elu ya
Nkwekọrịta mkpokọta mkpesa ma ọ bụ ncheta nke usoro nke ọrụ ọrụ, gbasara oge oge ezumike akwụrụ na oge oge ngosi ahụ na njedebe nke nkwekọrịta ọrụ.
Ọnụnọ nke ụgwọ ezumike, RTT, izu ike abalị…
Nkọwa gbara gị ume idebe ụgwọ gị ruo mgbe ebighi ebi
2) Ihe maka ịgbakọ ụgwọ ọnwa gị
Aha gị na ọnọdụ i jidere
Ọnọdụ ruru n'usoro metụtara ndị isi ọgbakọ (M1, M2, OS5)
Onu ogugu ghan gi
Bọchị na ọnụ ọgụgụ awa ọrụ nke ụgwọ ọrụ a gbasara
Paymentbọchị ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa
Ọdịiche dị n'etiti awa a kwụrụ ụgwọ ọnụego nkịtị na ndị abawanye na-ekwu maka ọnụego etinyere maka otu ọ bụla (awa abalị, mgbe oge gboo, Sunday, ezumike ọha na eze)
Typedị na ego nke mgbakwunye niile maka ụgwọ ọnwa niile (Chọpụta ihe ikwesiri ịnwe)
Onu ogugu nke ego enyemaka
Typedị na ego eji emeju ụgwọ maka ọrụ onye ọrụ na onye were ya n'ọrụ
Typedị na ego nke onyinye nchekwa ọha
Anddị na ego nke nwepu ego nile nke enyere gị na ego gị (kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-arịa ọrịa ma ọ bụ nwee ihe ọghọm na ọrụ)
Ofbọchị ezumike na ọnụego nke ụgwọ ọrụ gị n’oge a
Onu ogugu na onu ego nke ịnapu gi ego gbasara gi na ozi banyere ego a choro tupu ma mgbe amuputa ya
Onu ego nke onye oru wetara ya na egoa oge ochoro
Ozi nke n’adịghị egosipụta na payslip gị
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnye gị ụgwọ akwụ na-egosi itinye aka gị na iku ọrụ. Anyị enweghị ike ịtụ aka ọrụ aka gị. Karịa n'ozo ozi ọ bụla na-emebi ikike ndị mmadụ na onwe ya ma ọ bụ ikike mkpokọta.
Mụta ilere akara nke akwụkwụ gị n'usoro August 18th, 2020Tranquillus
gara agaResign na-enweghị ọkwa, ikike maka ụmụ nwanyị dị ime
-esonụOzi banyere onwe gị: ihe niile ịchọrọ ịma
Mmelite na Ntughachi ma ọ bụ nkwalite ọrụ ịmụ ihe (Pro-A).